Crunched: Ipulatifomu Yesethulo Esisiza Ukuthengisa | Martech Zone
Crunched: Ipulatifomu Yesethulo Esisiza Ukuthengisa
NgoLwesine, ngo-Okthoba 4, 2012 Douglas Karr
Kushunqisiwe ngumhlangano oku-inthanethi kanye nesikhulumi sesethulo esenzelwe ukuthengisa. Ukuncintisana ngqo nabantu abanjengoWebEx neGotoMeeting, i-Crunched yenze lula inqubo ngokuba nohlelo olugxile emhlanganweni, ukulandelela nokwabelana ngefayela, isethulo noma isikrini sakho ngekhasi lewebhu. Ayikho isoftware yokuthi ubani angalanda futhi asethe… vele uhlangane bese uya ku-URL yomhlangano ekhethiwe!
I-Crunched inikeza lokhu okulandelayo:
Meet - Qala izingqungquthela zewebhu ngaphandle kwesoftware encela umphefumulo. I-akhawunti iza ne-URL yomuntu siqu nenombolo yenkomfa.
Xhuma - Yiba nokuxhumana okuningi namakhasimende. Ngaphandle kwengxoxo, ungabuka futhi nephrofayili yezenhlalo yolwazi olukhona kanye nolwazi lwendawo.
Present - Phatha futhi wethule onezitezi noma wabelane ngesikrini sakho. Ithimba lakho lokuthengisa lingabelana futhi liqophe izethulo futhi!
ithrekhi - Izethulo ze-imeyili ngezixhumanisi ezilandekayo, bona ukuthi ubani ozifundayo nokuthi isikhathi esingakanani
Bambisana - Yabelana ngezethulo, imihlangano, amanothi nama-imeyili nethimba lakho ukuze wonke umuntu akwazi ukusiza ukwenza amadili
Amaqembu wokuthengisa nawo angabelana ngezethulo futhi abone amamethrikhi kubo bonke abasebenzi bokuthengisa. Lokhu kungaveza imininingwane ethile yokuthi umehluko wesethulo ungaba yini phakathi kwabadlali abaphezulu nabanye abaseqenjini lakho lokuthengisa.
Tags: isoftware yenkomfashwabeneenye indlela yokuthola ukuhlanganaisoftware yokuthengisaenye i-webex
Kunendaba Ngempela: www noma non-www